मेलम्चीबारे ‘किसुनजी’ ले बोलेको भिडियो कांग्रेसद्वारा सार्वजनिक नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनबारे बोलेको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। आयोमेल संवाददाता
पहिलो पटक डोजर र क्रेनले ल्याइयो विस्का जात्राको लिंगो, संस्कृतिविद्को आपत्ति
भक्तपुरको प्रसिद्ध विस्का (बिस्केट) जात्रामा योसिंखेल (भेलुखेल) मा उठाइने योसिंद्यो (लिङ्गो) ल्याइएको छ। विस्का जात्राको चौथौं दिन अर्थात् प्रत्येक वर्षको चैतको (अन्तिम) दिन उठाइने हात भएको यासंद्यो ल्याइएको हो। रेणु त्वानाबासु
सत्ता समीकरणमा ‘रेशम फिरिरी’
एकातिर ओली सत्ता जोगाउन अनेक कसरत गर्दैछन्। अर्कोतिर प्रचण्डहरूलाई यो निर्णयले झन् एक्ल्याइदियो। अब सत्ता समिकरणको साँचो घुमिरहेका बेला त्यसको केन्द्रमा पनि फेरि एकपटक जनता समाजवादी पार्टी छ। र, सत्तासाझेदारीमा उसको वार्गेनिङ प्वाइन्ट बनेका छन्– रेशम चौधरी। गजेन्द्र बाेहरा
हाम्रो घरमा सरकार पस्यो, अब कता जाने?
कोही भने आफन्तकोमा आश्रय लिइरहेका छन्। एक–एक पैसा जोडेर मिहिनेतले जोडेको घर सरकारी डोजरले ड्याङड्याङती भत्काउँदा उनीहरूको मुटु छियाछिया भयो। छातीमै डोजरले ठोकिरहे झैं भयो। आँसु झरिरहे, केही गर्न सकेनन्। सरकारले घर भत्काइदिएपछि बालाजुकी ६० वर्षीया आशामाया खड्गी आफन्तको घरमा बस्दै आएकी छिन्। रेणु त्वानाबासु
के हो एमिकस क्युरी? यस्तो छ इतिहास
उक्त मुद्दामा रिट निवेदकहरुले आफ्नो वकिलहरु राखेर बहस गर्छन् भने, जसलाई विरुद्व बनाइएको हुन्छ उनीहरुले पनि अधिवक्ता वा महान्यायधिवक्ता, वरिष्ठ अपधिवक्ता राखेर बहस गराउँछन्। जटिल प्रश्नमा संसारभरको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ। सोही अध्ययन अदालतमा पेश हुन्छ। अदालतलाई दुवै पक्ष उस्तै र सही लाग्न सक्छ। न्यायधीशहरुलाई कुन पक्ष सही वा बहस ठीक हो भन्ने कुरामा अन्याेल वा निर्णय गर्न जटिल लाग्न सक्छ। न्यायाधीशहरु आफैँमा सक्षम हुन्छन्। तर सक्षम हुँदा हुँदै उनीहरुले जटिल प्रश्नलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा तटस्थ विज्ञहरुको राय बुझ्न चाहन्छन्। अनिता श्रेष्ठ
स्कुलमै पढ्न पाउँदा भक्तपुरका विद्यार्थीको अनुहारमा देखिएको खुसी
भक्तपुर चाँंगुनारायण नगरपालिका–३ झौखेका विद्यार्थी अथर्व पालका सोमबार निकै खुसी देखिन्थे। उनको खुसीको कारण थियो, स्कुलमै गएर एक वर्षपछि पढ्न पाउनु। रेणु त्वानाबासु
३३ किलो सुनको गुथ्थी : पीडित प्रहरीलाई मिल्दैछ बढुवा, ‘पुरस्कृत’ पीडक कता छन्?
ढिलै भए पनि आंशिक न्याय मिले पनि उनलाई फसाएर पुरस्कृत हुनेहरु चाहिँ उम्केको उम्केयै छन्। अर्को संयोग के भने उनी फसाइदाँका गृहमन्त्री र अहिलेका गृहमन्त्री पनि उनै रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुन्। सुजन पन्त
‘सगुन’ का लगानीकर्ता उमेश कसरी सक्किए सुदिक्षासँगै?
घटनाबारे शुक्रबार राति पौने ९ बजे प्रहरीमा खबर पुगेको थियो। प्रहरीलाई खबर गर्नुअघि सुदिक्षाकी दिदी शर्मिला घटनास्थल पुगेर फर्किएकी थिइन्। शर्मिला आफैंले शुक्रबार बिहान ६ बजे बहिनीले फोन नउठाएपछि घटनास्थल घरमै पुगेको प्रहरीसमक्ष बताएकी छिन्। घटना थाहा पाएको १२ घन्टापछि मात्र शर्मिलाले प्रहरीमा किन खबर गरिन्? सुजन पन्त
दिवेशलाई न्यानाे न्याय
तीमध्ये एक हुन्, युएन महाशाखामा कार्यरत रहेका दिवेश लोहनी। लोहनी आफ्नो ब्याचमा अब्बल प्रहरी अधिकृतका रुपमा परिचित थिए। एसएसपी बढुवासम्मको बढुवा रेकर्डमा भने उनी शीर्ष ३ भित्रै पर्थे। एसपी हुँदा धीरजप्रताप सिंह १ नम्बरमा थिए भने लोहनी २ नम्बरमा। लोहनीको ब्याचमेट विश्वराज पोखरेल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भइसकेका छन्। आयोमेल संवाददाता
देउवा ‘मिलाएरै’ संसद विघटन
यसबाट उनले पार्टीको अधिवेशन लम्ब्याउन पाउँछन्। आफ्नो कार्यकाल पनि लम्बिन्छ। मध्यावधि चुनावमा पार्टीको जुन ‘पोजिसन’ आए पनि त्यसको जस देउवालाई नै जानेछ। र, त्यसलाई उनले फेरि पार्टीकै महाधिवेशनमा भजाउनेछन्। हरेक राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो फाइदा हेर्नु त ‘देउवा–चरित्र’ नै हो। चाहे त्यो कांग्रेस फुटाउँदा होस् या ज्ञानेन्द्रको शासनकाल। आयोमेल संवाददाता
सडक आन्दोलनसँग मेरो साइनो छैन : ज्ञानेन्द्र
‘यो आन्दोलन किन र कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा त तपाईं पत्रकारहरूले पत्ता लगाउने हो। त्यो त तपाईंहरूका लागि पनि बिग न्युज हुन्छ। लौ खोजेर हामीलाई नि भनिदिनुस् त!,' उनले भने, ‘राजपरिवारलाई यो आन्दोलनका बारेमा केही पनि थाहा छैन। कहाँबाट कसरी यो आन्दोलन उठिरहेको छ भन्नेबारे हामी नै अनभिज्ञ छौं। ज्ञानेन्द्र सरकारको भनाइ पनि यही नै हो। यो आन्दोलन हामीसँग सम्बन्धित छैन।’ आयोमेल संवाददाता
चिटिक्क शौचालयभित्र भव्य पुस्तकालय
सार्वजनिक शौचालयमै पुस्तकालय चलाउनका लागि उनले ‘मास्टर’ प्लान बनाउन थाले। आफ्नै ठाउँ सुन्दरहरैँचामा त्यसका लागि डिजाइन गर्न इन्जिनियरहरूलाई जिम्मा दिए। त्यसको सम्भाव्यताका लागि आफ्नो व्यापारी वृत्तमा छलफल चलाए। मिलन बुढाथाेकी
‘नेकपा जुट्दा न जनताले केही पाए, न फुट्दा राष्ट्रलाई क्षति हुन्छ’
२०७५ जेठ ३ मा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा दुई पार्टीबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भइरहँदा शीर्ष नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तामा गजबको उत्साह देखिन्थ्यो। धैर्यकान्त दत्त
कोरोना साँच्चै के हो? २५ दिन भेन्टिलेटर बसेका भक्तपुरका सुमनलाई सोध्नुस्!
तर, कोरोना के हो भनेर भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–८ इतबुँका ३० वर्षीय सुमन अवाललाई सोध्नुस्। उनले छर्लंङ्ग पारिदिनेछन्, खासमा कोरोना हो चाहिँ के भन्ने। किनकि, कोरोना संक्रमण भइसकेपछि उनले काठमाडौं टेकु अस्पतालको आइसियु–भेन्टिलेटरमा २५ दिन लगातार कोरोना भाइरसँग लडाइँ गरे र अन्ततः परास्त गरी छाडे। रेणु त्वानाबासु
वीरको चिसो भुईंबाट विलासको विलाप- हाम्रो दुःख काठमाडौंलाई के मालुम
‘खान बस्नको ठेगान छैन, भीख नमागी उपचार कसरी गर्नु? घरमा बालबच्चा छ, जल्दी इलाज भए घर जान्थेँ, आँखैअघि छोराको यो हालत कति देख्नु?’ अंगदबहादुर सिंह
‘घाँडो’ डाक्टरको प्राण कति शक्तिशाली?
डा. केसीलाई आफ्नो आधार क्षेत्र बचाउने यो लडाइँमा जिताइदिइसकेपछि उनीमाथि बरु अरू मामिलामा अनसन बस्न चाहिँ बन्देजै लगाइदिए पनि हुन्छ। सुन्दर खनाल
पुलिसलाई किन झनक्क रिस उठ्छ?
यहीँनेर एउटा कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने, नागरिक सरकारको रिस प्रहरीमाथि पोख्छन्। अनेकन तनावबाट गुम्सिएको प्रहरी मौका पाउनासाथ नागरिकमाथि विष्फोट हुन्छ। यद्यपि, आमनागरिकको व्यवहार पनि उस्तै हुन्छ। प्रहरीका अघि ‘पहुँच’ को धाक देखाउनुपर्ने, नियम तोड्दा आफूलाई ‘बहादुर’ सम्झिने। अंगदबहादुर सिंह
जिब्रो छेड्दा ‘भगवान’ थिएँ, अहिले कोरोना संक्रमित बोक्दा टोलका मान्छे आँखा तर्छन्
सांस्कृतिक जिल्ला भक्तपुरमात्रै होइन, पूरै देशभर बुद्धकृष्ण बाग (श्रेष्ठ) को अनुहार सांस्कृतिक परिचय हो। ७ वर्षदेखि जिब्रो छेड्दा सहेको पीडा उनलाई त्यत्ति दुख्दैन, बरु त्यो भन्दा धेरै दुख्छ, समाजको हेपाइ। उनै बुद्धकृष्णको अर्को सामाजिक परिचय छ, एम्बुलेन्स चालक। उनी १८ वर्षदेखि एम्बुलेन्स पनि चलाउँदै आएका छन्। रेणु त्वानाबासु
नेपाल बसेका ५ हजार चिनियाँमा कोरोना खोप परीक्षण गराउन चीनको ‘विशेष जोड’
‘हामीले नेपाल सरकारको अनुमति कुरिरहेका छौं। अझै केही समय कुर्नेछौं,’ स्रोतले आयोमेलसँग भन्यो, ‘केही समय कुर्दा पनि नेपाल सरकारले अनुमति दिएन भनेर चार्टर्ड उडानबाट चीन लगेर हाम्रा कामदारलाई त्यो खोप दिइनेछ र फेरि यहाँ फर्काउनेछौं।’ गजेन्द्र बाेहरा
विद्युतमा कार्यकारी निर्देशकको दौड, कुलमानकै सम्भावना कति?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न आकांक्षीहरू राजनीतिक दौडधूपमा लागेका छन्। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिन २० दिन बाँकी छ। यो दौडमा उनी नै अगाडि छन्। यम बम
ओली-प्रचण्डको काम मन नपरेरै एमाले दर्ता गरेका हौं : सन्ध्या तिवारी
तत्कालीन नेकपा एमालेमा आबद्ध तिवारीको नेतृत्वमा पुनः नेकपा एमाले नाममा पार्टी दर्ता हुनुले सतहमा अनेक प्रश्न उठेका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी एकतापछि पुरानै नेकपा एमाले नाममा फेरि पार्टी दर्ता हुँदा एकाएक राजनीतिक वृत्तमा हल्लीखल्ली हुन पुगेको छ। राजेन्द्र गाैतम
नेकपा एमाले अध्यक्ष सन्ध्या को हुन्?
नवगठित नेकपा एमाले अध्यक्ष सन्ध्या तिवारी पुराना कम्युनिस्ट नेता हरि भेटवालकी बुहारी हुन्। बुधबारमात्र नयाँ दलका रूपमा निर्वाचन आयाेगले मान्यता दिएकाे हाे। राजेन्द्र गाैतम